Sampatti News काभिड–१९ मनोसमाजिक परामर्श अभियान सिरहामा सम्पन्न, संक्रमितलाई मनोबल उच्च राख्न आग्रह - Sampatti News
काठमाडौँ । ओम समाज डेन्टल हस्पटले अभियान स्वरुप आयोजना गरेको कोभिड–१९ मनोसामाजिक मेची महाकाली परामशर्म अभियान बिहीबार सिरहामा सम्पन्न भएको छ । जिल्लाको लहान नगरपालिका–७ स्थित मारबाडी सेवा केन्द्रमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नपाका जनस्वास्थ्य अधिकृत राम सुन्दर यादवले बिरामी रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका हुन् । सोही अनुरुप अक्सिजन सहितका १५ बेड र नर्मल ३५ बेडको व्यावस्था मिलाईएको छ ।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै अभियानमा लागेका डा. सुभाष घिमिरेले कोरोना लागेको खण्डमा नडराउन तथा नआत्तिन आग्रह गरेका हुन् । अभियानमा निःशूल्क एम्बुलेन्स तथा निः शूल्क प्राथमिक स्वास्थ सेवा अभियानका लागि बिराज समाजको समन्वय समेत रहेको छ ।
मुलुक घुम्दै कोभिड–१९ का बिरामीलाई मनोसामाजिक परामर्श दिने उद्देश्यले एउटा समूह मेची–महाकाली यात्रामा छ । समूहमा चिकित्सक, कलाकार र सामाजिक अभियन्ता छन् ।
अभियानमा मुलुक घुम्दै कोभिड–१९ का बिरामीलाई मनोसामाजिक परामर्श दिने उद्देश्यले एउटा समूह मेची–महाकाली यात्रामा छ । समूहमा चिकित्सक, कलाकार र सामाजिक अभियन्ता आबद्ध रहेका छन् ।
काठमाडौंमा कोभिडका बिरामीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरेका अभियन्ताले मनोसामाजिक परामर्श अभियान पनि थालेका हुन् । अभियान प्रदेश १ को ओखलढुंगा जिल्लाबाट आइतबार सुरु भएको छ । अभियानमा डा. सुवास घिमिरे, अभिनेता निखिल उप्रेती, सामाजिक अभियन्ताहरू कर्णबहादुर शाही र शोभा गुरुङलगायत छन् ।
प्रकाशित मिति:June 11, 2021